I-Villa Natali entsha ene-pool - abantu abayi-6 - I-Airbnb
I-Villa Natali entsha ene-pool - abantu abayi-6
Kavran, Istarska županija, i-Croatia
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Jasmina
U-Jasmina Ungumbungazi ovelele
I-Villa Natali iyikhaya leholide elisanda kwakhiwa edolobhaneni elincane elithule iKavran. I-villa inamakamelo okulala ama-2, izindlu zokugezela ezi-3, ikhishi elihlome ngokuphelele kanye negumbi lokuhlala elinendawo yonke engu-130 m2. Indawo engaphandle ihlanganisa ichibi lokubhukuda elingu-24 m², indawo yokushiswa yilanga enezindawo zokuphumula elangeni, ithala elivalekile elinefenisha yasengadini kanye nendawo yokosa inyama. Amakamelo okulala, ikhishi kanye negumbi lokuphumula kune-air conditioner, wonke amagumbi ambozwe ngophawu lwe-wifi futhi kukhona nezindawo zokupaka ezi-2.
- 2 amakamelo okulala ngalinye linendawo yokugezela yangasese
- njengengxenye yendawo yokuhlala eyodwa yokugezela
- Ikhishi elihlome ngokugcwele elinehhavini, i-microwave, umshini wekhofi, i-toaster
- igumbi lokuhlala elinombhede osofa
- 24 m ichibi lokubhukuda
- indawo yokushiswa yilanga enezindawo zokuhlala elangeni
- ithala elimbozwe ngefenisha yasengadini
- 2 izindawo zokupaka
Sinaka kakhulu ukuhlanza nokubulala amagciwane kuwo wonke amagumbi nezindawo. Phakathi kwalokhu kubhuka okubili amakamelo anomoya futhi ahlanzwa kahle futhi abulawe amagciwane.
I-HDTV engu-43" ene- I-Netflix, ikhebula ye-premium, Isevisi evamile ye-cable kamabonakude
I-villa yethu iseKavran, idolobhana elithule. Yindawo enhle yokuphumula futhi ujabulele iholide lakho. I-villa yethu ivalekile futhi ingeyokugcina ngokulandelana ngakho ukuthula nobumfihlo kuqinisekisiwe.
Me and my husband Franko are hosts of our new house which has name of our daughter Natali. We are young family and we really love to host our guests. We are friendly and communicative persons and every guests is very important for us. We also love to traval and see some new cultures and meet different people. We will do our best to make your stay with us as comfortable as possible.
Me and my husband Franko are hosts of our new house which has name of our daughter Natali. We are young family and we really love to host our guests. We are friendly and communicat…
Ngiyatholakala kunoma yiziphi izihambeli ngesikhathi uhlala endlini yami kumakhalekhukhwini noma nge-imeyili.
UJasmina Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Kavran namaphethelo